SlayerAI- သင်အနိုင်ရရန်လိုအပ်သည့် စကားလုံးများစွာကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း | Martech Zone
SlayerAI- သင်အနိုင်ရရန်လိုအပ်သည့် စကားလုံးများစွာကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 18, 2022 အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 18, 2022 Douglas Karr
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ငါး ခေါင်းစီးကို လူတော်တော်များများ ဖတ်ဖူးသလောက် body copy ကိုဖတ်ပါ။ မင်းရဲ့ ခေါင်းစီးကို ရေးပြီးရင် မင်းတစ်ဒေါ်လာထဲက ဆင့်ရှစ်ဆယ်ကို သုံးစွဲလိုက်ပြီ။
David Ogilvy၊ Advertising ကြော်ငြာအပေါ် Ogilvy
Slayer သည် ဥာဏ်ရည်တု (AI) ပေးထားသော ပရိသတ်အား ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအား မည်ကဲ့သို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း ခန့်မှန်းသည့် ထုတ်ကုန်။ ဥပမာ ဂျင်းဘောင်းဘီကို နားလည်တယ်။ မင်းညီမင်းသား များမှာ 15% ပိုဆွဲဆောင်မှု ဂျင်မီထက် တိုတိုအတို ဖက်ရှင်စျေးကွက်ထဲမှာ။ Slayer သည် သင့်ပရိသတ်အတွက် အောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိရန် သင့်ပရိသတ်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျရလဒ်များ ပေးဆောင်သည့် ကော်ပီပေါ်လာမည့်နေရာအပေါ် အခြေခံ၍ စာသားကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ AI သည် ယခင် ကမ်ပိန်းများနှင့် စာသားများ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုနှင့်အတူ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့နောက် စာသားပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်စေရန် လေ့ကျင့်ထားသည်။
Slayer ကိုအသုံးပြုပုံဥပမာတစ်ခု ဖောက်သည်တိုးလာခြင်းသည် 30% ထိ၊ အများသူငှာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီအတွက်၊ OneSpan. OneSpan သည် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသော ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် Slayer ကို အသုံးပြုခဲ့သည်-
SlayerAI သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
ပြီးခဲ့သော3နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသည့် ကော်ပီပမာဏ ရှိသည်။ 10 ဆကျော် တိုးလာသည်။.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုစျေးကွက်အရွယ်အစားသည် 38.2 တွင် CAGR 2030% ဖြင့် 12 တွင်ဒေါ်လာ 2020 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။ virtual reality နှင့် artificial intelligence ထွန်းကားလာမှုကြောင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိရိယာများသည် ဝယ်လိုအားရုတ်တရက်တိုးလာသည်ကိုတွေ့မြင်နေရပါသည်။ ခန့်မှန်းချက်ကာလ အတွင်း။
ဤတိုးတက်မှုသည် အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်သည် - အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုသို့ တိုးမြင့်လာခြင်း၊ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ သုံးစွဲသူအသစ်များ တိုးပွားလာခြင်းနှင့် AI ဖြင့် ကော်ပီဖန်တီးနိုင်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာဖန်တီးရန် အရည်အချင်းနှင့် ကိရိယာများ ယခင်ကထက် ပိုမိုများပြားလာပြီး အွန်လိုင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသို့ ကူးပြောင်းမှုသည် ကော်ပီအတွက် လိုအပ်ချက်ကို မြင့်တက်စေသည်... နှင့် ပိုမိုကြီးမားလာပါသည်။
SlayerAI သည် သင့်အား စျေးပေါပေါဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အကြောင်းအရာပင်လယ်တစ်ခုအတွင်း သင့်ပရိသတ်များနှင့် ပဲ့တင်ထပ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပေးပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကြီးမားသော ဆက်သွယ်ရေးသည် စူပါပါဝါဖြစ်လာသည်။ သင်၏မိတ္တူဖြင့် ထင်ရှားစေရန်၊ သင့်တွင် မှန်ကန်သောသဒ္ဒါနှင့် စာလုံးပေါင်းများ ရှိစေရန် သို့မဟုတ် အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့်များကို လိုက်နာရန်မှာ သေချာသည်ထက် ပိုလိုသည်၊
လက်ရှိတွင်၊ ဆက်သွယ်ရေးညံ့ဖျင်းမှုပြဿနာကို လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (ဥပမာ- လူသားတည်းဖြတ်သူ) နှင့် သင့်အား ယေဘုယျသဘောတူညီချက်များကို ပေးဆောင်ပေးမည့် အချို့သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း (သဒ္ဒါနည်းအားဖြင့် လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်)။ လူသားတည်းဖြတ်သူများသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အထူးသီးသန့်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အထူးပြုကော်ပီစာရေးဆရာကို ရှာဖွေခြင်းသည် စျေးကြီးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်များစွာရှိပါသည်။
SlayerAI သည် သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကမ်ပိန်းများကို တသမတ်တည်း ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အထူးသဖြင့် စံပြလက်ထောက်ဖြစ်သည်။
SlayerAI က ဘယ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးလဲ။
SlayerAI သည် အွန်လိုင်းတွင် ကော်ပီရေးသားသူတိုင်းအတွက် အံ့ဖွယ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် Slayer အသုံးပြုသူများသည် လုပ်ငန်းကြီးများ၊ လုပ်ငန်းငယ်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများနှင့် တစ်ဦးချင်း အလွတ်ကူးယူရေးသားသူများ ပါဝင်ပါသည်။
AI သည် အကန့်အသတ်ဖြင့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းသည် အကြောင်းအရာများအပြင် ချက်ချင်းတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
လများအစား မိနစ်ပိုင်းအတွင်း A/B စမ်းသပ်မှုကို ရက်သတ္တပတ်များ ပြုလုပ်ခြင်း။
သဒ္ဒါအစား စာလုံးပေါင်းကို စစ်ဆေးပါ။
ကော်ပီကောင်းရေးရန် သော့ချက်မှာ သင့်ပရိသတ် လိုချင်သည့်အရာကို ဦးစွာ ဆုံးဖြတ်ပြီး သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Slayer သည် ဒါဇင်များစွာသော ပစ်မှတ်ပရိသတ်များမှ ရွေးချယ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ crypto ကိုစိတ်ဝင်စားသူများမှ၊ ဖက်ရှင်၊ အလှတရား၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ကားများ၊ အိမ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် အခြားအရာများကို စိတ်ဝင်စားသူများအထိ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ AI ကို ဘီတာအသုံးပြုသူအုပ်စုငယ်များနှင့် အကျယ်တဝင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်များသည် ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သည်။ start-up ကိုကူညီခဲ့သလား အဖွင့်နှုန်းကို 12% မှ 19% တိုးမြှင့်သို့မဟုတ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုအား ၎င်းတို့၏အလုပ်စစ်ဆေးခြင်းကို အချိန်နည်းစေခြင်းဖြင့် ကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးခြင်း။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝဘ်ဆိုက်ခေါင်းစီးများ၊ အကြောင်းအရာလိုင်းများ၊ ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ်များ၊ ကြော်ငြာကော်ပီ၊ လူမှုရေးပို့စ်များနှင့် SMS များကို ရေးလိုပါသလား။ Slayer သည် သင့်အား မျက်နှာစာအားလုံးတွင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Slayer ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရှင်းသည်၊ အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းပါ၊ အကောင့်ဝင်ပါ၊ ထို့နောက်။
သင် အမှတ်ပေးလိုသော မိတ္တူကို ဖြည့်သွင်းပြီး အကြံပြုချက်များ ပေးလိုသည် ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဒါပဲ! သင်၏စံပြပစ်မှတ်ပရိသတ်ကို မတွေ့ပါက၊ ဝဘ်ဆိုက်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ dropdown ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အသစ်တစ်ခုတောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသော ရမှတ်သည် သင့်စာသားများ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ AI သည် 80%+ တိကျသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ခေါင်းစီးသတင်းများသည် ယခုအခါ သင့်အဖိုးတန်စာဖတ်သူများ၏ မျက်လုံးများကို ပို၍မကြာခဏဖမ်းစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Viral သွားတဲ့အခါ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကို ပေးခြင်းသည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ကံကြမ္မာကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စံချိန်တင်ရောင်းချသည့်နှစ်နှင့် ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းတို့ကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို အများဆုံးပြုလုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် သင်၏တိုးတက်မှုနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှု၏ အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းမှာ SlayerAI ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုစာရင်းသွင်းပြီး SlayerAI ၏2ပတ်လုံးဝအခမဲ့ရယူလိုက်ပါ။
SlayerAI စမ်းသပ်မှုအတွက် စာရင်းသွင်းပါ။
ထုတ်ဖော်ချက်- ကျွန်ုပ်သည် Amazon နှင့် အတွက် ကျွန်ုပ်၏ တွဲဖက်လင့်ခ်များကို အသုံးပြုနေပါသည်။ SlayerAI ဤဆောင်းပါးတွင်ပါ။
Tags: ကြော်ငြာကော်ပီaiကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာ optimizationCTRပွင့်လင်းနှုန်းထားများအီးမေးလ်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ခေါင်းစဉ်အလိုက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ကြော်ငြာ ctr ကိုတိုးclick-through နှုန်းကိုတိုးမြှင့်အီးမေးလ်ဖွင့်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ပါ။ပွင့်လင်းနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခေါင်းစီးများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။လူသတ်သမားကိုဘာသာရပ်လိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
WordPress Queries နှင့် RSS Feed တွင် ပို့စ်များနှင့် စိတ်ကြိုက်ပို့စ်အမျိုးအစားများကို ပေါင်းစပ်နည်း